Ihe omuma nke textiles》
Isi otu ihe omuma banyere akwa
1 yad (Y) = 0.9144 M (M) 1 inch (1 ") = 2,54 cm (CM) 1 yabụ = 36 sentimita 1 paụnd (LB) = 454 g (g) 1 ounce = (OZ) = 28.3 g (g )
Ndi. Nkọwa nke nkọwapụta akwa:
Nọmba Denny: na-ezo aka na ọkpụrụkpụ nke yarn ogologo ogologo, ya bụ ogologo nke mita 9000 nke yarn, ịdị arọ ya bụ 1 gram (g), nke a na-akọwakarị dị ka 1 Dan, nke akwụkwọ ozi Bekee bụ "D" nọchiri anya ya. Iji maa atụ, yarn ogologo 9,000m, nke dị gram 70, akọwapụtara dịka 70 Dan. Tumadi iji na-anọchi anya chemical eriri ọkpụrụkpụ.
2. Ọnụ ọgụgụ nke eriri na njupụta nke akwa na ahịhịa: na-anọchi anya njupụta nke ákwà ahụ, ya bụ, ọnụọgụ nke eriri na weft kwa square nke anụ ọhịa, nke akwụkwọ ozi Bekee bụ "T" nọchiri anya ya. Lezienụ anya na ọnụ ọgụgụ nke ọnụ ọgụgụ nke nyocha nke ụzọ ịkpụcha akwa, chọpụta iwu kwekọrọ na ịkwa akwa, iji tụọ ọnụ ọgụgụ ziri ezi nke ọnụ ọgụgụ ahụ.
3. Nọmba F: ọ bụla eriri ma ọ bụ weft yarn mejupụtara ọtụtụ filaments. Nọmba F na-anọchite ọnụ ọgụgụ nke filaments na akwa ma ọ bụ akwa weft, nke akwụkwọ ozi Bekee "F" nọchiri anya ya. N'aka nke ọzọ, aka gị dị gịgịrị, na-esikwu ike.
4, ọkpụrụkpụ nke yarn staple: n'ozuzu, ojiji nke "yarn", ya bụ, paụnd nke owu poke owu yarn nke 840 yards, a na-akpọ yarn a yarn, ya na mkpụrụedemede Bekee "s", dị ka 21 yarn bụ 21s. (mgbe ntụgharị gasịrị: 21S = 250D)
5. rickwà nkọwapụta ụdị:
Ogologo ọkpụrụkpụ / F × weft ọkpụrụkpụ / F.
Ọnụ ọgụgụ nke yarn + na ọnụọgụ nke eriri yarft
"60" nwekwara ike ịkọtara 70D × 190T × 60 ″
3. Nhazi ọkwa akwa:
1. Nkesa site na okike (nkọwapụta zuru oke bụ ndị a)
Enwere ike ịkekọrịta eriri n'ime eriri anụ ọhịa na ihe ndị sịntetik site na njirimara ha. Eke anụ ahụ gụnyere owu silk, flax, ajị anụ, wdg, ebe eriri artificial gụnyere naịlọn, polyester, acetate, wdg. Ihe ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke ọtụtụ eriri ndị a na-ejikarị:
A. Naịlọn b. Naịlọn c. Naịlọn d. Naịlọn naịlọn na-ekewa n'ime "naịlọn 6" na "naịlọn 66 ″. “Naịlọn 66 ″ a dịgasị iche iche nke anụ ahụ Njirimara dị mma karịa“ naịlọn 6 ″, isgwọ bụ ihe dị oké ọnụ. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, ya na ọkụ iji mee ka anwụrụ ọkụ na-acha ọcha, nụ ụdị mọstad. A na-ejikarị ya esiji acid esiji.
B, Polyester: Bekee bụ "Polyester", nke a na-egosipụtakarị dị ka "T". N'okpuru ọnọdụ nkịtị, na anwụrụ ọkụ (mana ị alsoa ntị na, mgbe nylon gluu n'ihi ihe kpatara ya, ọkụ na-aghọ anwụrụ ọkụ ojii, ya mere payaa ntị iji mata ọdịiche), na-ere ọkụ ngwa ngwa, na-esi isi ísì. A na-ejikarị ndị na-agba agba na-agba agba agba. Ekwesiri ilebara nlebara anya anya na agba na sublimation ngwa ngwa.
C. Owu d. Owu N’okpuru onodu, n’enwe oku, oku n’onwu di nwayoo, oku n’acha odo, owu n’etu uto anyi n’aru karia. Ntụ ntụ owu na-acha ọcha. Ntụ nke Rayon na-adịkarị oji, mana ha niile na-atọ otu ụtọ. A na-ejikarị agba agba na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-agba agba.
D) udiri uzo di iche iche dika: , owu-polyester mechie (C / T) na ụdị eriri ndị ọzọ. Ọmụmaatụ, "N / C" na-anọchi anya "akwara bụ naịlọn, weft bụ owu", "C / N" na-anọchi anya "agha bụ owu, weft bụ naịlọn". Were gabazie.
E, enwekwara eriri acetate, ajị anụ, silk hemp na eriri ndị ọzọ, enwekwara ngwakọta, enwere Tencel fiber (English Tencel, yana akwụkwọ dị ka akụrụngwa viscose fiber).
2. Nkesa dị ka ụzọ ịkpa ákwà:
Dabere na ụzọ ịkpa akwa, a na-ekewa ya n'ime akwa a kpara akpa, akwa ejiri akwa na akwa na-enweghị akwa, nke enwere ike kewaa ọzọ dị ka ndị a:
A. na-akpa: e na-enwekarị okirikiri knit na knit knitit
B. Ejiri akwa: ejiri akwa nke ejiri akwa na akwa weft. Dika uzo di iche iche nke eji esi akwa na akwa, enwere ike kewaa ya n'ime Taffeta, Twill, Sattin na Dobby, wdg. (Dee: larịị dị larịị, Twill na satin weave bụ "akwa atọ mbụ" nke akwa akwa), na n'otu oge ahụ, a ga-ejikọta ha na agha ma ọ bụ weft iji mepụta usoro dị iche iche. Na nkenke, enwere ọtụtụ ụdị mgbanwe, nke ọ dị mkpa ka a mụọ ma ghọta na ọrụ bara uru.
C. Non-kpara akwa: ọ mere site kpọmkwem adhesion na mkpakọ nke emepughị enweghị kpara.
3. Enwere ike kewaa ya:
A, FDY, DTY, ATY. FDY kpara ngwaahịa ndị naịlọn, polyester, FDY Oxford ákwà; Ihe ndi DTY kpara gunyere nkpuru mmiri, ukpa peach, akwa Oxford akwa, wdg ATY bu nke eji eme akwa akwa. E nwekwara ụdị ndị a na-agwakọta site na n'elu iji rụpụta mmetụta dị iche iche.
B, ọkara ìhè, ikpochapu na flash. Ọkara ọkụ bụ ngwaahịa sitere n'okike, ọ bụrụ na enweghị ọgwụgwọ pụrụ iche, eriri ahụ bụ ọkara ọkụ; Mwepu na usoro mmepụta eriri iji gbakwunye ngwaahịa nke titanium oxide, nke mere na ákwà ahụ nwere ike ịbịaru nso na mmetụta nke eriri eke, mara mma mara mma karị; Flash bụ mmetụ nke ọkụ nke na-egosipụtasị eriri ndị ahụ n'oge nrụpụta eriri site na ime ka akụkụ ha nwee akụkụ atọ ma ọ bụ site na ime ka elu nke eriri ndị ahụ dị nro.
4. Common akwa umu:
1, Taffeta: naịlọn Taffeta gbara ọkpụrụkpụ, polyester Taffeta, polypolyester agwakọtara Taffeta, ọnọdụ zuru ezu: yarn ahụ dị mma, akwa akwa dị larịị ma dịkwa mma, dịtụ mkpa, dịka: naịlọn 70D × 190T, 210T, 230T; Naịlọn 40D × 290T, 300T, 310T; Polyester 75D * 190T, 68D * 190T; Polyamide polyester batara 40D × 50D × 290T, wdg. A na-ejikarị ya yarn FDY.
2. Oxford: naịlọn Oxford, polyester Oxford na tasilong Oxford. N'ikwu okwu n'ozuzu, yarn ahụ dị ike na ezigbo akwa, dị ka nylon 210D, 420D na 840D (nke FDY klas). Polyester 150D, 300D, 600D, 1200D (nke klas DTY); Polyester 210D, 420D (klas FDY); 200D × 300D Taslon 200D, 400D × 500D (nke dị na klas ATY), wdg.
3. Taslon: naịlọn Taslon, polyester Taslon na Oxford Taslon. Ọnọdụ n'ozuzu: akwa yarn ahụ dị arọ, elu akwa ahụ dị njọ, ọ na-enwekwa mmetụta nke ọgaranya na mmetụta nke owu na-agbagharị. Dị ka: naịlọn taslon
Maazị Zheng (306949978) 10:23:21
70D * 160D * 178T, 184T, 228T, taslon 320D, 640D, taslon Oxford 200D * 300D, 400D * 500D, wdg.
4. Mmiri subtextile (Pongee): n'ozuzu ọ bụ polyester DTY yarn na akwa akwa siri ike (ma e wezụga 50D) na mmetụta aka dị nro, dịka: polyester spring subtextile 75D * 190T, 210T, 240T, 50D * 280T, 290T, 300T, wdg. .
5. Trilobal: naịlọn taffeta, polyester taffeta, poly-polyester interlace flash, ya bụ, yarn ndị a kpara akpa dị ka yarn na-egbu maramara, dị ka: ni flash 70D * 190T, 210T, polyester flash twill, wdg, na iji otu flash na abụọ flash ( iche iche ma ọ bụ weft dị ka flash silk a na-akpọ otu flash, na isi na weft dị ka flash silk a na-akpọ okpukpu abụọ flash).
6, Twill (Twill): akwa akwa ọka maka Twill, Twill ákwà n'ozuzu ibu njupụta nke ogologo na weft. Dị ka: nylon twill 70D * 210 * 230T, 272T, 290T, polyester twill 75D * 75D * 230T, 260T na ngwakọta agwakọta.
7. Wekpa ákwà: dị ka brocade / polyester interweave (N / T), brocade / cotton interweave (N / C), polyester-cotton interweave (T / C), wdg naịlọn na polyester nwere ike ịbụ FDY, DTY ma ọ bụ ATY, ọkara-luminous, matte ma ọ bụ nke onwunwu. N’etiti ha, akwa yarn ahụ kewara n’ime mkpokọta izugbe, nke ọkara bekee, nke a kpụkọtara ọnụ, ka nwere ụfọdụ yarn achara.
8. Piich akpụkpọ (Microfiber): makwaara dị ka Microfiber. Dị ka polyester peach akpụkpọ anụ 43022 (75D * 240T), 43099 (75D * 150D * 220T), 43377 (twill, 75D * 150D * 230T), wdg.
9. Satin na satin.
10. Na mgbakwunye, enwere lattice (Ripstop), jacquard (Dobby), wdg nke etolitere site na mgbanwe nke ụdị akwa dị n'elu.
V. ule nke nkọwapụta akwa:
N'ime ọrụ ga-etinye uche na izi ezi nke nyocha nkọwapụta akwa, ozugbo ndudue ga-akpata ọnwụ na-enweghị atụ, yabụ kwesịrị itinye anya pụrụ iche na nyocha nke nyocha nkọwapụta nke uwe na ịkpa oke, ma attentionaa ntị na nsị nke ahụmịhe ọrụ ahụ , jide n'aka na ị nyochachara nke ọma.
1. Njirimara nke akwa: naịlọn, polyester, owu, N / C, T / C, wdg.
2. Ngwongwo yarn: FDY, DTY, ATY, wdg.
3. Style (ọdịdị ọdịdị): ịkwa akwa, twill, check, satin weave, Dobby, wdg
A. larịị larịị: otu ogologo akwa na otu akwa, okpukpu abụọ na okpukpu abụọ, okpukpu abụọ na otu akwa na akwa abụọ (eriri abụọ ejiri abụọ), wdg.
B. twill: 1/2, 1/3, 2/2, 2/3, wdg.
C, lattice: enwere lattice nzuzo, uzo na-ese n'elu mmiri (ahịrị abụọ na-ese n'elu mmiri, ahịrị atọ na-ese n'elu mmiri), ma attentionaa ntị na oke nke lattice ahụ, ọnụọgụ nke ahịrị na mpaghara zonal na ntanetị na ebe a na-ese n'elu mmiri nke eriri na-ese n'elu mmiri. .
D. maka satin, ukwu ole (ma obu weft) ka akwa (ma obu weft) na-ese n'elu ya na ole weft (ma obu weft) ka akwa (ma obu weft) ruru?
E, Dobby dịgasị iche iche, ọzọ anya na nyocha nke iwu nke ịkpa ákwà.
F. attentionaa ntị na ụdị na atụmatụ ndị ọzọ.
Denny count or yarn count: agha, weft na kwekọrọ F ọnụ.
5, ogologo oge na akwa akwa: jide n'aka na ị ghọtara iwu nke ịkwa akwa, ọnụọgụ nọmba na ngụkọta nke ziri ezi.
6. Ọkara ọkụ, mbibi ma ọ bụ ọkụ ọkụ.
7. Obosara nke ákwà ahụ (attentionaa ntị na obosara n'ime ma ọ bụ n'èzí pinhole, ma attentionaa ntị na obosara dị irè nke ngwaahịa a rụchara mgbe ịtinye gluu ma ọ bụ nhazi ndị ọzọ).
Vi. Nkesa nkpuru osisi (mgbakwunye)
Isi nke isi ihe ọmụma banyere agba na ịmecha akwa
I. nhazi usoro nhazi
Embrayo nnyocha na desizing dyeing na ihicha nke sewn ẹmbrayo ákwà, gụchara na nhazi mgbe nnyocha (gụnyere shaping, gluing, calendering, embossing, zọ, n'ịnọgide ịkwanyere, Pu akpụkpọ anụ, njọ, flocking, wdg)
Ndi. Okwu mmalite nke usoro ọ bụla na njikwa na-elekwasị anya:
1. Embrayo nyochara akwa akwa akwa ẹmbrayo:
A. ya bụ, a na-adụ otu akwa ẹmbrayo n'ime Nnukwu mpịakọta ma ọ bụ A igbe nke ụgbọ ala, nke akpọrọ A cylinder, ọnụọgụ A na-agbanwe dị ka akwa akwa si dị.
B. Nnyocha ẹmbrayo bụ tumadi ịchịkwa àgwà nke ẹmbrayo ákwà ịhụ ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla na-adịghị mma dị ka ịbịaru, weft file, nwụrụ anwụ anọghị n'ogige atụrụ, odo ntụpọ, mildew ntụpọ, wdg N'otu oge ahụ, anya kwesịrị ịlele ma akwa ahụ kwekọrọ na ihe ndị a chọrọ. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, achọrọ ọnụ ọgụgụ ogbe.
2. na-achọsi ike:
A. Iji mee ka yarn ahụ ghara ịchafụma n'oge a na-akpa ákwà, yarn ahụ na-agba agba, n'ihi ya, ọ ga-ebelata tupu agba ya maka agba.
B. Ọ bụrụ na desizing adịghị ọcha, a ga-agba tụrụ, pulp tụrụ na ndị ọzọ ntụpọ mgbe dyeing.
C. N'ozuzu, mgbe ị nwụsịrị, a ga-asacha ma kpochaa akwa ahụ, ma ọ bụghị ya, akwa ahụ nwere nnukwu uru PH ga-emerụ ya nke ọma na nsogbu ndị ọzọ ga-eme.
D. enwere n'ozuzu uzo abuo nke ichota: in-cylinder na-acho ihe na ogologo ugbo ala. N'ozuzu, nke mbụ nwere mmetụta dị mma karị, ma arụmọrụ dị ala.
(1) chemical eriri dyeing:
A. Nkịtị okpomọkụ: n'ozuzu n'okpuru 100 ℃, tumadi na-eji maka dyeing ọkara okokụre naịlọn taffeta, naịlọn Oxford, naịlọn twill, wdg. Usoro a dị mfe iji mepụta isi na ọdụ chromatic aberration, aka ekpe, etiti na aka nri chromatic aberration, crease na nsogbu ndị ọzọ.
B. High okpomọkụ mpịakọta dyeing: okpomọkụ bụ n'ozuzu banyere 130 ℃, tumadi eji maka dyeing polyester taffeta, N66, naịlọn matting ákwà, polyester Oxford (filament), wdg usoro a dị mfe iji mepụta isi na ọdụ agba dị iche, aka ekpe, etiti na etiti agba di iche, njiko, agba agba na ndi ozo.
C. Uwe dyeing: okpomọkụ dị ihe dị ka 100 ℃ ruo 130 ℃, a na-ejikarị eme ihe maka polyester ngwaahịa dị ka akwa mmiri, akwa peach velvet, polyester Oxford, tullon, polypolyester interweave, wdg. Ka ọ dị ugbu a, a na-ejikwa nylon na ngwaahịa ndị ọzọ nwere wrinkles n'ụzọ dị otú a. Usoro a dị mfe iji mepụta okooko osisi agba, akara ụkwụ ọkụkọ, agba chara acha ma apịaji. D. ogologo dye dyeing: adabara niile di iche iche nke ákwà, ma a ga-eji ezi uche dị ka àgwà chọrọ. Enwere ike ịchịkwa okpomọkụ na-esi na 100 ℃ gaa karịa 130 ℃, nke dị mfe ịmepụta ihe ndị dị otú ahụ dị ka akụkụ na-emighị emi na akụkụ dị iche iche.
(2) dyeing ụzọ nke ọzọ akwa:
A. Cotton dyeing: n'ozuzu ogologo ụgbọ ala dyeing (nnukwu ibu chọrọ), Rolling dyeing (buru ibu ma ọ bụ obere ukwu kwere), tojupụtara dyeing (ọkara ma ọ bụ obere obere kwere). Reyes dyes (with good fastness), direct dyes (with ogbenye ngwa ngwa) na reductive dyes (na nke kacha mma ngwa ngwa) dị.
B, N / C, C / N dyeing: overflow dyeing na-adịkarị nakweere. A na-ebu ụzọ mee ákwà owu, mgbe ahụ, e jikwa ajị agba náịlọn. A na-eji agba agba na-eme ihe na-acha odo odo na acid dyes (na ngwa ngwa ka mma) maka naịlọn. Jikwa ya dye dye (ogbenye adịghị ngwa ngwa).
C, T / C, C / T dyeing: anubataghachiri dyeing n'ozuzu nakweere, polyester na-ehicha mbụ na mgbe ahụ na owu na-ehicha, polyester na-e ji esiji gbasaa e ji esiji ákwà, owu na-ehicha na reactive e ji esiji ákwà (ezi ọsọ) E nwekwara ogologo dyeing ụgbọ ala, dyeing, na-eji kpọmkwem dyes (ogbenye ngwa ngwa).
(3) nhazi ọkwa:
A, acid dyes: eji maka dyeing naịlọn akwa, n'ozuzu iji siri ike na agba iji melite agba ngwa ngwa, kamakwa ị paya ntị na nhọrọ nke ngwakọta ngwakọta na iji usoro ezi uche dị na ya. A na-ahọrọ ndị na-edozi ihe n'ụzọ na-ezighi ezi ma ọ bụ usoro ọgwụgwọ dị oke elu nwere ike ime ka obi sie gị ike.
B. Achụsasị dyes: eji maka dyeing polyester akwa. N'ozuzu, ịsacha VAT kwesịrị iji meziwanye agba ngwa ngwa. Achụsakwa dyes-etinye uche pụrụ iche nyefee na sublimation ngwa ngwa.
C, ihe ejiji na-agba agba na akwa dyes: dị na akwa okpomọkụ dị ala.
4. Ihicha n'ozuzu kewara n'ime ala ihicha na-abụghị kọntaktị ihicha)
A, ọ dịghị kọntaktị ihicha enweghị kọntaktị draya na ịkpụzi igwe, ọ dịghị kọntaktị n'etiti akwa na kpo oku, na-adabere na ikuku na-ekpo ọkụ na-agba mmiri na akwa ahụ iji nweta nzube nke ihicha. Tumadi eji maka ihicha ejupụta dyed ngwaahịa na-akwa ákwà N'ụbọchị nke abụọ, ma ọgaranya obi na-adị. Ọnụ ego dị elu karịa ihicha ala. B. rumgba ihicha: akwa ahụ dị kpọmkwem na ịgbà, na ebumnuche nke ihicha akwa ahụ na-enweta site na ikpo ọkụ ahụ. Tumadi eji maka mpịakọta dyeing na hie doo dyeing ngwaahịa (dị ka naịlọn silk, polyester, naịlọn Oxford, polyester filament Oxford, wdg), ụlọ elu nke silk ogologo klas nwekwara ike ịbụ onye mbụ na drum draya ihicha (ma naanị ike ịbụ onye mbụ ihicha isii, asaa kpoo ka ọ ghara ime ka aka ahụ sie ike), wee gaa igwe iji mee nhazi mmiri iji meziwanye mmiri. Lower ihicha na-eri.
5. Nnyocha dị n'etiti:
A. Nnyocha dị n'etiti ga-anwale ịdị ngwa agba dị iche iche nke akwa ahụ ma attentionaa ntị na ịdị mma nke akwa ahụ, dị ka nsị, ọdịiche agba (agba dị iche, esemokwu cylinder, ọdịiche olulu), ụcha agba, ntụpọ agba, unyi, griiz , yarn ịbịaru, weft file, warp warara, wdg. B. Jikwaa ngwaahịa nkwarụ site na ịbanye ngalaba dị ala iji gbochie mmụba nke ụgwọ. Mgbe ịmechara ma mezie akwa ahụ, ụfọdụ ngwaahịa na-adịghị mma enweghị ike ịmezi ma ọ bụ sie ike idozi ya. C. a ga-ahazigharị akwa ahụ ma kpachie ya tupu ịbanye na ngalaba na-esote.
6. Mechaa imewe:
A. Mgbe emechara ya, njirimara anụ ahụ na nke kemịkal nke akwa ahụ adịtụghị mma. Dịka ọmụmaatụ, ịda ada, obosara, agha na akwa weft adịghị mfe ịgbanwe. N'otu oge ahụ, iji mechaa atụmatụ a, ngalaba a ka nwere ike ịrụ ọrụ nhazi ole na ole, dị ka mmiri na-agba mmiri (mmiri na-egbochi mmiri), nro, na resin, ọkụ na-ere ọkụ, antistatic, nnukwu mmiri (ọgwụgwọ teflon), na-amịkọrọ mmiri iji gbapụ ọsụsọ , na-alụ ọgụ nje iji gbochie isi na-echere oge. B. N'ihi na elu ọnọdụ okpomọkụ, ntị kwesịrị-akwụ ụgwọ na agba mgbanwe tupu na mgbe mwube, karịsịa ụfọdụ mwute agba, dị ka isi awọ, ndị agha green, ìhè khaki, wdg Ngwaahịa na-adịkarị ka a kwekọọ na nke ikpeazụ agba . C. ịkpụzi ihe nwere ike ijikwa obosara, ogologo na njupụta weft, nsị, wdg, ọkachasị njikwa nsị, nke na-emetụta ọnụahịa nhazi ozugbo, yabụ kwesịrị ịkwụ ụgwọ nlebara anya pụrụ iche. (usoro ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ anyị chọrọ ka a na-achọkarị bụ ịsacha mmiri nke 3%, na-asacha nsị nke 2%). Isi ihe na-emetụta mmetụta ịkpụzi ọkụ bụ ọnọdụ okpomọkụ, ọsọ na ị speedụbigabiga mmanya ókè. D. Okwu mmalite nye ọtụtụ ụdị nhazi:
(1) ikwommiri mmiri mechaa imewe nke ákwà nwere waterproof na dustproof ọrụ;
Soft mezue imewe ahụ na-eme ka akwa ahụ dị nro ma dị mma, ma attentionaa ntị na ma akwa ahụ ga-amị yarn. Enwere ike ịme mmiri na-agba mmiri na ihe dị nro n'otu oge, na-eme ka akwa ahụ ghara ịchọta mmiri ma dị nro, mana nro ga-emetụta mmiri mmiri.
(3) resin mechaa imewe na-bụ-eji maka ákwà nke siri ike yarn ma ka obi stiif, ụfọdụ nke resin nwere formaldehyde, kwesịrị ntị ka nhọrọ; Spray mmiri na resin set nwere ike mere n'otu oge, na resin ịgba gị n'ụlọnga nwere a na-akwalite mmetụta.
Onye na-ere ọkụ na-emezigharị atụmatụ nke ọrụ ọkụ ọkụ nke akwa ahụ nwere ọrụ inyeaka, enwere ike ịme ọkụ ọkụ n'otu oge ahụ iji mezue atụmatụ nke mmiri, mana iji nlebara anya pụrụ iche na nhọrọ nke onye na-ahụ maka mmiri, ma ọ bụghị ya onye ire ọkụ na-ere ọkụ buru oke ibu.
Antistatic mezue imewe ahụ na-eme ka akwa ahụ nwee ọrụ nke antistatic, nwere ike mechaa nhazi ahụ na mmiri mmiri n'otu oge, mana nwee mmetụta ịmịpụ mmiri.
Mmiri mmiri 6 na ọsụsọ mezue imepụta ahụ ka akwa ahụ wee nwee ike ịmịcha ọsụsọ ngwa ngwa, uwe egwuregwu na-enwe nnukwu nkasi obi. I nweghi ike iji mmiri me ya.
Antibacterial deodorant nhazi tumadi ikwe ka ákwà na antibacterial ọrụ, tumadi na-eji ụlọ ọrụ ọgwụ.
Taa overpill mmiri set (na-akpọ teflon ọgwụgwọ): karịa nkịtị ikwommiri mmiri setịpụrụ na mma waterproof, dustproof mmetụta, kamakwa na mmanụ mgbochi ọrụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, onye ọbịa ahụ ga-ajụ maka akara ngosi dupont ahụ.
7. Calendering na gluing:
A, mmetụta nke ịmịkọrọ mgbatị na-eme ka mmetụta dị nro na-eme ka akwa akwa akwa dịkwuo ala, belata oghere dị n'agbata eriri akwa iji gbochie nsonaazụ ahụ ma ọ bụ mee gluu nwere ike nweta nrụgide mmiri dị elu na-eme ka elu ahụ dị larịị ma mara mma na-enwe mmetụta. Ihe atọ nke calendering bụ okpomọkụ, ọsọ na nrụgide. Calendering na-agbanwe agba nke akwa. C. Nkowa nwere ike ime ka akwa ahụ ghara igbochi mmiri, ihe mkpuchi, ikuku na ọrụ ndị ọzọ, yana yarn siri ike na akwa ahụ, mee ka ọdịdị na mmetụta dịkwuo elu, ma mee ka mmetụta dịkwuo njọ, na-eme ka akwa ahụ baa uru maka ojiji. D. acrylic (nke a makwaara dị ka AC, PA), PU nrapado, ume na ume na-egbu egbu, nke nwere ike ịhazi n'ime nrapado transperent, nrapado ọcha, ọlaọcha ọlaọcha, nrapado agba, nrapado pearl, uri nrapado na na. Ọzọkwa nwere ike ịgbakwunye kwekọrọ ekwekọ akụrụngwa na mama nke mere na o nwere mgbochi UV, ire ọkụ retardant, mgbochi yellowing na ndị ọzọ na mmetụta.
E. Lezienụ anya ịchịkwa mmiri mgbali, na-eche (ọkpụrụkpụ, adụ na ike), mama edo, ike bee, mmiri na-eguzogide (whiteness), whiteness, wdg Ọzọkwa ntị ka elu nke colloidal ahụ, metụtara, ma akọrọ. Ekwesiri ilebara anya na mmetụta nke elu nrapado na teepu mmiri (PVC warara / PU warara).
8, PVC bonding: ntị ka ọkpụrụkpụ nke bonding, obi na-adị, bonding bee ike, àgwà nke nrapado elu.
9. Nhazi ndị ọzọ: akọrọ Pu (akọrọ akwụkwọ), mejupụtara, Pu akpụkpọ anụ, wdg.
10. Washingsacha: ụfọdụ akwa owu, N / C, T / C kwesịrị ịsacha. Enwere ike kewaa mmiri mmiri n'ime ịsa mmiri nkịtị, ịsa mmiri dị nro na ịsa mmiri enzyme (wepụ ntutu n'elu akwa owu).
11. Final nnyocha: lelee àgwà nke okokụre ngwaahịa, ọkwa ha, abịa na ndokwa ha maka Mbupu, na n'ozuzu-eme nnyocha ndia na kenha table. Nsogbu ọ bụla kwesịrị ịbụ nzaghachi oge nye onye na-ere ahịa ka ya na ndị ahịa wee nwee nkwurịta okwu.
Isi iii mesiri ike na akwa akwa
1, obosara: n'ozuzu na-ezo aka irè obosara, ya bụ, pinhole obosara, ma ọ bụ mgbe mama irè obosara.
2, agha ogologo na weft njupụta: nlezianya chọrọ ga-a attentiona ntị na mmụba nke ogologo na weft njupụta.
3, weft ekwe: izugbe okporo ákwà weft ekwe ekwe agaghị ukwuu karịa 3%, larịị ákwà weft ekwe agaghị abụ karịa 5%.
4. Mbelata mbelata: ọnụego shrinkage nke ngwaahịa emechara na ntụziaka na usoro zonal mgbe ịsachara.
5. Ogo mmiri na-agbawa mmiri: A tụrụ ISO site na ogo (ogo ogo 50 ~ 100 ogo dị mma) ma ọ bụ site na ọkwa AATCC (ọdịiche 1 ọkwa ~ 5 ogo dị mma). AATCC larịị 3 dị ka ogo ISO 80.
6, ngwa ngwa agba: nke a bụ ihe ngosi dị oke mkpa, ọ nwere ngwa ngwa ịsa ahụ (na-agba agba ọsọ ọsọ, agba ọsọ ọsọ), ngwa ngwa na-eguzogide mmiri (gbanyụọ, agba ya na agba), anyanwụ (adịkwaghị agba) agba ọsọ na ịsọ ngwa ngwa (nweta ịjụ oyi, ntụpọ na agba), na fastness na igba ajirija (ibu adịkwaghị agbapụta, ntụpọ na agba), sublimation ngwa ngwa, na mpe mpe akwa dyeing, wdg, dị ka tụrụ site larịị esi (1 ~ 5).
7. Ike: ike ike, ike akwa na mgbapu mgbapu (kg / cm2).
8. Mgbochi nrụgide mmiri: ike nke mmiri na-eguzogide mmiri (akara mmiri mmiri), dị ka 2000mm / H2O (mm kọlụm mmiri), nke dị elu karịa uru, ọ ka mma ịrụ ọrụ mmiri.
9. Mmiri mmiri: unit bụ g / M2 * Day, na-egosi ogo mmiri na-agafe na 1 square mita nke akwa na 24 awa na ụfọdụ okpomọkụ na iru mmiri.
10. Mgbafu mmanụ: ndepụta nyocha maka akwa teflon nhazi, kewara n'ime akara 5 (akara ọkwa 1 ~ 5 akara ọma).
11, na mgbakwunye na arụmọrụ ọkụ, mgbochi static, anti-ultraviolet na njirimara ndị ọzọ nke ule ahụ, ndị a chọrọ nzukọ ọkachamara iji nwee ụzọ iji nwalee, ebe a abụghị nkọwa zuru ezu.